Faritra Amoron'i Mania : Fitsidihana ny asa fanamboarana barazy sy lakandrano
mardi, 12 octobre 2021 18:46
Nanao fitsidihana ireo barazy sy lakandrano ny solotenan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny FORMAPROD tao amin'ny lemak'Ankazoambo distrikan'Ambositra, faritra Amoron'i Mania.
Hita fa efa vita ny asa amin'ny ankapobeny, ary tody soamantsara ny rano, ka tsy misy atahorana ny hahatapaka azy mandritr'izao fotoana maintany izao.
Tsapa fa mihezaka ny mpampiasa rano manajary ny taniny, ka ao ny manao voly avotra, ao no manomana dobo-trondro sns.
Dingana manaraka ny fandraisana vonjy maika ny asa, izay hatao tsy ho ela, sy ny fanofanana ny Fikambanan'ny Mpampiasa rano amin'ny fitantanana sy fikojakojana ary ny fanajariana ny fotodrafitrasa mba hampateza azy, toy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny lakandrano, ny fitantanana ara-drariny ny rano, fikojakojana azy.
Nanambara moa ny Governoran'i Faritra Mamiarisoa Radaloson fa Amoron'i Mania ho faritra fitaratra amin'ny asa fambolena sy fiompiana ary asa tanana, ka nisaotra ireo ministera sy fikambana ary tetikasa FORMAPROD izy amin'izao ezaka iaraha-manana eo anivon'ny fitondram-panjakana mijery ifotony ny olana sy mitondra vaha olana amin'izany.